Taty aoriana, tamin' ny taonjato faha-4, dia lanin' ny maro an'isa tamin' ireo nivory nandritra ny Kônsily tao Nikea ny tenim-pinoan' ny Trinite izay mihevitra an' Andriamanitra ho tokana nefa manana persôna telo, dia ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Noraiketina tao amin' ny fanekem-pinoana nikeana izany sady nohamafisina tamin' ny kônsily hafa taty aoriana koa. Andriamanitra ny Ray, Andriamanitra ny Zanaka, Andriamanitra ny Fanahy Masina, hoy izy ireo nefa tokana Andriamanitra. Ny tenim-pinoan' ny Trinite dia miaro ny maha tokana an' Andriamanitra sady mampivoitra ny fananan' io Andriamanitra io persôna telo izay samy manana ny anjara asany tamin' ny famoronana izao tontolo izao sy amin' ny famonjena ny olombelona. Tsy mora ny mahazo ny tiana ho lazaina amin' ny hoe persôna satria tsy azo lazaina tanteraka ho fomba fiseho samihafan' ilay Andriamanitra tokana izany araka ny hita amin' ny tantaran' ny fampanjakana ny tenim-pinoan' ny Trinite izay nanamelohana fampianarana maro toy ny môdalisma sy ny dôketisma ary ny maro hafa koa. Niteraka fisamatsamahan' ny kristianisma nandritra ny tantarany hatramin' izao izany toe-javatra izany. Ny Katôlika sy ny ankamaroan'ny Prôtestanta ary ny Ortôdôksa dia mino ny Trinite.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriamanitra_(tokana)&oldid=1043188"
Dernière modification le 22 Janoary 2022, à 13:59
Voaova farany tamin'ny 22 Janoary 2022 amin'ny 13:59 ity pejy ity.